Shil ka dhacay dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 42 ruux oo howlgab ahaa – STAR FM SOMALIA
Shil ka dhacay dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 42 ruux oo howlgab ahaa
Ugu yaraan 42 qof, oo u badan dad howlgab ah ayaa la rumeysan yahay inay ku geeriyoodeen shil baabuur oo ka dhacay meel u dhow magaalada Bordeaux, taasi oo lagu qeexay shilkii waddo ee ugu xumaa ee dalka France ka dhaca muddo ka badan 30 sano.
Saraakiisha ayaa sheegay in gaari xamuul uu ku dhacay bas ay rakaab ka buuxaan meel u dhow waddada Puisseguin, taasi oo sababtay in labada baabuurba ay holcaan.
Sideed qof oo kaliya ayaa lagu warramay inay ka baxsadeen holaca, ayada oo tobaneeyo saraakiisha xaaladaha deg degga ah ay goobta gaareen.
Madaxweyne Francois Hollande oo ka hadlay shilka xilli uu safar ku joogo dalka Greece ayaa sheegay in dowladda ay diyaar u tahay inay la tacaasho musiibadan aadka u xun.
Shilkan ayaa la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu xumaa ee ka dhaca France tan iyo sanaddii 1982-kii markaasi oo shil bas oo ka dhacay bariga dalka France ay ku geeriyoodeen 53 qof oo 44 ka mid ah ay ahaayeen carruur.
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping oo booqasho ku joogga Magaalada London, ayaa waxay isku arkayn jilaaga weyn ee Jackie Chan(Daawo Sawirada).
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Moscow ee dalka Ruushka